Ogaden News Agency (ONA) – Hanjabaada Abay Tsehaye iyo Diidmada Oramada – Noora Afgaab
Hanjabaada Abay Tsehaye iyo Diidmada Oramada – Noora Afgaab
Posted by ONA Admin	/ February 18, 2015
Waxaa meela badan laga daawaday ninkan awooda badan ee Abay Tsehaye markuu u hanjabayay xubno ka mid ah xisbiga Oromada ee lagu magacaabo OPDO oo ka tirsan taxaalufka EPRDF. Hanjabaada ninkan ayaa ka dambaysay ka dib markay diideen inay fuliyaan mashruuca balaadhinta Adis-Ababa ee loo yaqaano Master Plan.
Warbixinada saxaafadda Oromada ayaa sheegaya inuu Abay Tsehaye shiriyay xubnaha ugu sareeya xisbiga OPDO, ka dibna amar ku siiyay inay fuliyaan mashruucan. Hasa ahaate, madaxdii xisbiga Oromada ayaa u sheegay in aanay fulin karin mashruuc aan laga talagalin oo aanay ka qayb galin daraasadiisa, taasoo bay yidhaahdeen ay adagtahay in aan shacabkanaga ku qancino wax aanan ogayn siduu ku socdo. Wuxuu ugu jawaabay idinkama maqli karo wax la yidhaahdo Maya. Intaa markay dhacday ayay madaxdii xisbiga OPDO, waxay kula soo noqdeen xubnaha xisbiga, kuwaasoo si adag ugu gacan saydhay oo cadeeyay inay dagaal ka xigaan fulinta Master Plan-ka.
Waxay go’aansadeen OPDO-dii inay u soo hordhigaan mashruuca baarlamaanka gobolaka Oromada si looga doodo, hasa ahaatee Abay Tsehaye ayaa ka hordhacay oo isugu yeedhay maamulkii magaalada Adis Ababa iyo degmooyinka ku hareereysan wuxuuna ku amray inay fuliyaan mashruuca. Shirkaa isaga ah ayay maamuladii waxay uga soo jeediyeen su’aalo badan oo la xidhiidha sharciga, ugu dambayna waxay u sheegeen inay kula noqonayaan baarlamaanka gobolka, sababtoo ah bay yidhaahdeen way nugu adagtahay in aan ka dhaadhicino mashruuc aanan qudhanada fahamsanayn kuna qanasnayan shacabka laga rari doono dhulkooda.
Kooxda TPLF ee Abay Tsehaye oo ka midka ahaa asaaska ururkooda, uma aanay baranin in wax laga weydiiyo amarka ay bixiyaan oo la yidhaahdo aan kasoo fiirsano, inla diido iyada joojibee. Intaa markay dhacday ayuu isugu yeedhay madaxdii OPDO, wuxuuna ku eedeeyay inay mu’aamaradeeyeen mashruuca, wuxuuna ugu hanjabay inuu ka takhalusi (eliminate) doono OPDO, kan ugu sareeya ilaa midka ugu hooseeya, iyo sidoo kale qofkii ishortaaga mashruuca Master Plan-ka. Wuxuuna u cadeeyay in masruuca Master Plan-ka la fulinayo ama Oromada ha ogolaadaan ama yaanay ogolaanini.
Caqliga Wayaanaha waa midkaa. Inkastoo horeyba loo ogaa, hadana hanjabaada noocan ah waxay fadeexad ku noqotay xisbiyada maqaarsaarka ah ee kula bahoobay EPRDF, waxayna si dhab ah u muujinaysaa in is-bahaysiga EPRDF ee ururka OPDO-ga uu yahay cududiisa dhabta ah, marka la eego xubnaha u codeeya ama maamulka ka haya (Grassroots) inuu yahay xisbi u adeega danaha TPLF oo kali ah.
Maxay tahay sababta ay Oromada ku diidan yihiin Master Plan-ka. Sidaan la socon, magaalada Adis Ababa waxaa lagaga qaaday Oromada dastuurka loo dajiyay Itobiya oo ka dhigay Adis Ababa magaala madaxda Federaalka Itobiya oo aanay sheegan karin inay gooni u leeyihiin Oromada oo doonayay inay ka dhigtaan caasimadooda. Magaalada oo aad u fidaysa ayaa waxay barakicin ku sameysaa beeralaydii iyo tuulooyinkii Oromada ee ku hareereysan.
Hadaba mashruucan ayaa waxaa lagu wadaa in dhul balaadhan lagaga qaado dadkii daganaa ka dibna lagu daro xadka Adis Ababa. Waxaa barakicintaa dheer iyadoo dadka khubarada ah ee ku xeel dheer Qorshaha Magaalada (Town Planning) ay ka digeen habka loo qorsheeyay mashruucan Adis Ababa inuu abuurayo khasaare weyn oo xagga deegaanka ah oo gaadhi doona boqolaal Kilometer meel ka durrugsan. Sidaa darteed, waxay doonayaan in daraasad fiican lagu sameeyo, isla markaana dadka la barakicinayo loo helo nolol iyo deegaamayn kale. Hasa ahaatee kooxda TPLF oo ah niman boob ku socda, ayaan dan ka lahayn shucuubta kale oo aanay u muuqanin wax ka durugsan malaayiinta jeebkooda ku soo dhacaysa.